Fitaterana: Fatiantoka iray lavaka
vendredi, 12 avril 2019 12:45
Betsaka ny miroboka amin'ity asa ity, ary araky ny filaza hatrany dia "matoa manohy dia mahita tombony, raha fatiantoka efa nijanona.
Matoa koa betsaka ny miditra dia afera mety izy zany".
Amantaonany no nanaovako io asa fitaterana io, ary nanana fiara maro niasa tokoa aho, efa ela kosa no nijanona tamin'io.
Nanara-maso akaiky ity asa ity aho nandeha aty Mahajanga.
Izao no hitako:
Saran-dalana: 30 000 ariary Tana - Mahajanga
Nanao solika vao niainga 260 000 ar (60 litres teo)
Tonga teo Maevatanana, nanampy solika 40 000 ar (11 litres teo)
Solika izany 300 000 ar.
Olona 16 izahay no tao anaty fiara, ny teo amin'ny devant, ny 2e équipage, teren'ny lalàna tsy maintsy misy 2e chauffeur ny fiara. Ary raha nisy escorte zandary, dia izy no nanampy teo.
Vola naloa tamin'ny koperativa 15 000 ariary, ny tany ambadika no tsy hitako;
Ny docker sy mpamatotra entana, nisy nomena fa tsy hitako ohatrinona.
Tsy resahina ny karaman'ny saofera sy ny 2e équipage.
Ny hotely, tsy mandoa ny sofera sy ny 2e équipage.
Raha totaliana izany no lany, tsy hidirantsika aloha izany eto ny pneu, menaka, ny motera, sy ny frein mety ho simba ary tsy maintsy andaniam-bola, dia
mitotaly 350 000 ar teo.
Ny vola miditra, raha feno ka tsy misy tapa-dalana ny 16 x 30 000ar = 480 000 ar
Tsy resahiko ny frais amin'ny entana. Matetika iny no miantoka ny fanapahan'ny Zandary sy Polisy, zava-misy izany, raha ho any Antsiranana dia miomana 140 000 ar ho an'ny barazy miisa 70.
Tamin'ny dianay teo dia tena tsy nisy ny fandidiana nataon'ny Zandary, teo Andriba no nisy nanakana fa tsy naka vola.
Raha atao izany ny kajy aller-retour, raha dona miverina ny fiara dia mitondra mody 260 000ariary ny fiara, mety mahavita 2 voyages (aller-retour) isan-kerinandro raha tsara ny karama ny maintany. Zara raha mahita voyage tokana rehefa ratsy karama, indrindra ny fotoanan'ny orana.
Raha antsasa-taona no tsara karama, dia 260 000 ar x 2 voyages x 4 semaines x 6 mois= 12 480 000 ar
Ny Antsasa-taona ratsy karama sy mety tsy hiasana fa anaovana entretien 260 000 ar x 4 semaines x 6 mois= 6 240 000 ariary
Totaliny vola miditra 1 taona = 12 480 000 + 6 240 000= 18 720 000 ariary.
Pneu 4 mety ho lany 6 volana, pneu 1= 240 000 ar
Pneu 8 izany 1 taona = 240 000 ar x 8 = 1 920 000 ar
Vidange 5 000 km, isam-bolana izany raha anatin'ny tsara karama. Menaka 7 litres, menaka cacheté 5l izao 100 000 ariary, hatramin'ny filtre huile sy filtre air, tsy latsaka izany 200 000 ariary isaky ny vidange, isam-bolana.
Ny plaquette sy tambour ary disque de frein, mety isaky ny 6 volana, tsy latsaka koa ny 400 000 ar isan-taona.
Tsy miresaka disque embrayage sy batterie izay mety soloina isaky ny 2 taona.
Raha mikasika motera dia 10 000 000 ariary ny motera bonne occ.
Vidin'ny fiara nandehananay teo, tsy latsaka ny 50 000 000 ariary hatramin'ny fametahana fitaratra sy nanao seza, ary porte bagage.
Ny assurance sy visite technique, dia tsy latsaka ihany koa ny 50 000 ariary isam-bolana.
Ny karama saofera 500 000 ariary isam-bolana izy roa.
Ny hetra-panjakana sy ny patanty, ary ny DDT, ATT, Kaoperativa mety ho 500 000 ar isan-taona.
Ajanoko eo, fa sao marary an-doha ny tompon'ny fiara efa miasa izao.
Fa raha atao izany ny kajy miditra sy ny mivoaka, raha atao kaoty ambony, dia 20 000 000 ar isan-taona no miditra, ary 11 000 000 ariary no mivoaka, tsy mikasika motera.
9 000 000 ariary izany no miantoka ny patron, ny vidin'ny fiara, sy ny mety fanamboarana motera.
Raha 50 000 000 ar ny vidin'ny fiara, ka natao trosa Micro cred, dia maka zanabola 75% isan-taona i Micro cred.
Raha vola efa nangonina kosa, dia 6 taona, tsy mandray vola ny tompon'ny fiara vao miverina ny volany. Nefa azo antoka fa 4 taona fiara miasa Tana-Mahajanga mahavita 200 000Km, nefa fiara bonne occ efa 120 000km matetika ireny fiara tonga eto ireny, ka dia 300 000km no vitany, mbola tsy miverina ny vola, efa hitsipaka eo izy zany.
Fatiantoka iray lavaka.
Tsy miteny aho hoe akaro ny saran-dalana, na ahenao ny vidin'ny pièce, izay fôpla koa no betsaka. Fa raha tiana ny ampandroso ny firenena dia io resaka fitaterana io no asiana vaha olana aingana. Na resaka lalana io, na resaka solika, na resaka fanampiana ny mpitatitra.
Any ivelany, tsy mahamenatra ny mpitondra no manampy ny mpitatitra, satria ain'ny firenena.
Atao ahoana no hiaina amin'ny fantiantoka.
Mila manaja ny bokin'andraikitra sy ny fenitry ny maha matihanina ihany koa anefa ny mpitatitra.
Ataotsika resaka hafa mihitsy ny taxi-be izay iaraha-mahita fa efa tsy izy intsony ny fiara miasa, izay vizaka avy nanao nasionaly sy rejionaly no atao poubelle an-drenivohitra, satria raha panne dia mba an-tanàna.
Mirary soa ary mankahery ireo mpandraharaha fitaterana namana.